Primrose Matambanadzo - CeSHHAR Zimbabwe
Primrose is a health and human rights activist concerned with sexual and reproductive health and HIV/AIDS, particularly with respect to women and sexual minorities. She currently leads the National Sex Work Programme “Sisters with a Voice”, implemented by CeSHHAR on behalf of the National Aids Council (NAC) and the Ministry of Health and Child Care (MoHCC) in 10 static, 23 highway mobile clinic and 24 local mobile clinic sites across all 10 provinces of Zimbabwe. The programme served more than 25 000 sex workers in 2019. Prior to taking up her role as project lead for the key populations programme Primrose led research on the effect of prices, distribution strategies, and marketing on the demand for HIV self-testing in Zimbabwe.
Primrose has worked in the fields of health and human rights in Zimbabwe for the past 20 years and has experience in research, programme and organisational management. She studied for her Bsc Honours in Politics and Administration with the University of Zimbabwe and her MSc in Public Health with the London School of Hygiene & Tropical Medicine. In 2012, Primrose was awarded a Commonwealth Professional Fellowship focusing on human rights, public health and health advocacy. Primrose served as a member of Zimbabwe’s Country Coordinating Mechanism for the Global Fund to Fight HIV/AIDS, TB and Malaria between 2009 and 2011 and as the vice chair of the Regional Coordinating Mechanism for Mozambique, Zimbabwe and South Africa (MOZIZA) for the Global Fund to Fights AIDS, TB and Malaria.
Primrose has served on the boards of the Adult Rape Clinic (ARC), the Tree of Life, Chiedza Child Care Centre, Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) and the International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO). She also served as Chairperson of the Zimbabwe Human Rights NGO Forum (2010-2012) and Spokesperson of the Crisis in Zimbabwe Coalition. Primrose worked as the Executive Director of the Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights (2006-2011) and as Advocacy Co-ordinator of the Media Monitoring Project Zimbabwe (2005-2006) focusing on repression of information rights and freedom of expression in Zimbabwe. Between 2002 and 2004, Primrose worked as the Head of the Research Unit of the Zimbabwe Human Rights NGO Forum. She has several publications under MMPZ, the Zimbabwe Human Rights NGO Forum and ZADHR on violations of freedom of expression and information rights and on organised violence and torture in Zimbabwe.